isoftware ye-imeyile yokuthengisa - iNelju.cz
I-Tag Archive: isofthiwe yokuthengisa i-imeyile
Ngaba iThuluzi lokuThumela i-imeyili liyakwandisa ukuthengisa?
7.9.2016 23.1.2017 Beraniste3 izimvo
Senze ukuthumela ukuqala ukususela ekuqaleni Xa i-2013 iqalile ukusebenzisa i-imeyile ukukhuthaza ukuthenga i-e-shop, asizange sisebenzise naziphi na izixhobo zokusebenza. Uninzi lwee-imeyile zethu zithunyelwa ngqo kwi-interface ye-eshop. Akuzange kuvumele ukuba senze nayiphi na ingxelo ebalulekileyo, kodwa yayilungele ukuthumela i-imeyile. Ixesha lisebenza, idibanisa yolwazi oluqokelelweyo lukhule, kwaye ...